खाडीको चर्को घाममा काम चलिरहन्छ, पसिना बगिरहन्छ, कहिलेकाहीँ त लाग्छ यतै मरिन्छ | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
खाडीको चर्को घाममा काम चलिरहन्छ, पसिना बगिरहन्छ, कहिलेकाहीँ त लाग्छ यतै मरिन्छ
जेठ १३, २०७८ बिहिबार १०:४२:७ | नारायण कोइराला
अब त बर्खा लाग्यो, पानी आउन थाल्यो होला नि ? यो प्रश्नले मलाइ प्रत्येक वर्ष झस्काउने गर्छ ।
यो प्रश्न कानमा परेपछि एक छिन टोलाउँछु । यो पालि पनि बर्खा लाग्दै गएपछि म यही प्रश्नको उत्तरको खोजीमा छु । यता बर्खा होइन गर्मी लागेको छ । अनि आकाशबाट पानी होइन गर्मीले पसिना खलखलती बगेको छ ।
परदेशमा छु । आफ्नो आमालाई त सन्तानको पिर भइहाल्छ । अझ मलाई त गाउँका अरू बुढी आमाहरूसँग पनि कुरा गर्न, आफ्नो कुरा सुनाउन र उनीहरूको कुरा सुन्न खूब मज्जा लाग्छ । फोनमा आमाहरूले पानी परेको छ, फलानो ठाउँमा पानीले यस्तो भयो भनेर सुनाउँदा म पनि नबुझ्ने गरी भन्छु आमा यहाँ पानी त खासै आउँदैन । तर काम गर्दा भने झरीमा रुझे जस्तै हो । आमाहरू हाँस्दै भन्नुहुन्छ पानी नै नआउने ठाउँमा के काम हुन्छ बाबु ?
आमालाई यहाँ हुने काम र बग्ने पसिना म कसरी कुन शब्दमा बुझाऊ । जे होस् टालटुले जवाफ दिन्छु ।
हुन त गर्मीको मौसममा ठाउँ अनुसार खाडीमा मात्र होइन धेरै थोरै गर्मी त नेपालमा पनि हुन्छ । तराईका विभिन्न सहरमा दिउँसो समयमा गर्मी खाडी बिर्साउने हुन्छ पनि भन्छन् ।
तर खाडीको गर्मी कल्पनाभन्दा परको हुन्छ । तर आफूलाई बचाएर काम गर्नु बाहेक अर्को विकल्प पनि त हुँदैन ।
गर्मी सुरु भएपछि खाडीका देशले बाहिर खुल्ला ठाउँमा काम गर्ने समय कटौती गर्छन् । यो नियमले पनि हामीजस्ता कामदारलाई केही भए पनि राहत हुन्छ । तर सबैले यो नियम मान्दैनन् । ठुला कम्पनीले यस्ता नियम माने पनि साना कम्पनीहरूले यस्ता कुरामा वास्ता गर्दैनन् ।
भनाइ र गराइमा निकै फरक हुन्छ । त्यो त बस भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ ।
यहाँ यस्ता काम पनि छन् जुन कम्पनीले सुविधा दिन खोज्दा खोज्दै पनि सुविधा दिन मिल्दैन । काम नै त्यस्तो किसिमको हुने गर्छ । फलाम कम्पनीमा काम गर्ने कामदारको अवस्था नै हेरौँ । यो पनि त इनडोर काम हो नि तर फलाम गलाई आकार दिने ठाउँमा कामदारलाई सुविधा दिन्छु भन्दा पनि दिन सकिँदैन । यो त एउटा सानो उदाहरण मात्र हो । दन्किरहेको गर्मीमा खलखलती पसिना बगाउँदै काम गर्नु बाहेक अरू कुनै उपाय नै हुँदैन ।
यस्तै अनेक उदाहरण छन् जुन ठाउँमा काम गर्दा दिनभर पानी पिएको पिएकै, पसिना बगाएको बगाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । इनडोर काम भनेर के गर्नु गर्मी नै बढी भएपछि त कसले रोक्न सक्छ र मजदुरको यो अवस्थालाई । एकातिर कामको दबाब अर्कोतिर गर्मीको समस्या दुवैतिरबाट पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था छ । इनडोर भनेपछि गर्मी पनि काम गर्ने समयमा कुनै कटौती पनि हुँदैन । काम चलिरहन्छ ,पसिना बगिरहन्छ ।
हाम्रो सोच आउटडोर कामदारलाई बढी गर्मी हुन्छ भन्ने छ । यो ठिक पनि हो । खुल्ला आकाशमुनि बालुवा तातेको बेलाको गर्मी सहन अति कठिन छ । एकातिर आँखा तिरमिराउने गर्मी अर्कोतर्फ जमिनको बालुवाको पोलाई । हाम्रो शरीरलाई गलाइरहेको हुन्छ ।
यो अवस्थामा बिहान डिउटी जाँदा साँझ ज्यान फर्किन्छ कि फर्किन् भन्नुपर्ने अवस्था छ । खाडीका मजदुरको यो अवस्था देख्दा मन धुरुधुरु रुन्छ । पसिनासँग पैसा साट्न आइपुगेकाको अवस्थाले मन गह्राै हुन्छ ।
जस्तो होस् यहाँ आइपुगेको एक मजदुरलाई पैसा कमाउन पर्छ । गाउँमा साहुको ऋण हुन्छ । बुवा आमाको आस हुन्छ । भविष्य पनि बनाउन पर्छ । यो अवस्थामा दिनभरि बगेको पसिना, लागेको थकान कहाँ देखाउन सकिन्छ । हर कोसिस यी दुःख लुकाउने हुन्छ ।
दिनभरि तातो घाम र पसिनामा डुबेर आए पनि साँझ मलाई एकदम ठिक छ भनेर हाँस्नुपर्छ ।
कमाउन गएको एउटा छोराले आफ्नो बुढी आमालाई यस्तो हाल कसरी देखाउने, कसरी सुनाउने । आफ्नो सुखद खबर सुन्दा मुस्कुराएकी आमाको एक मुस्कान नै हामी परदेशीका लागि दुःख भुलाउने ओखती बन्छ ।
खाडीमा गर्मी आउँछ जान्छ । काम निरन्तर चलिरहन्छ । मजदुरको शरीरबाट पसिना बगिरहन्छ । यस्तो प्रचण्ड गर्मीमा कहिले काहीँ त यतै मरिन्छ कि झैँ लाग्छ ।
अन्तिम अपडेट: कात्तिक २८, २०७८
खाडीबाट फर्केको युवा
May 27, 2021, 11:58 a.m.
खाडीको चर्को घाममा काम गर्नेको अनुहार यस्तो गोरो, सुकिलो मुकिलो हुन्छ ? आफूचै एसिवाला कम्पनीमा काम गर्दो हो अनि मरिमरि बिल्डिङमा झुण्डिएर, डण्डि कस्ने अनि ब्रेकमा खुल्लै ठाउँमा खाना खानुपर्ने अरुको अवस्थालाई आफ्नै बनाएर लेखिटोपलेको रहेछ।
संघीय सरकारले पालिकाका कर्मचारी सरुवा गर्नु संघीयताको मर्म र...
कांग्रेस महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको नाम सार्वजनिक (...
पोर्चुगलका राष्ट्रपतिद्वारा संसद् विघटन, चुनावकाे घोषणा
यूएईमा साढे चार दिनकाे कार्य हप्ता ताेकियाे, अब शुक्रवार आधा दिनपछि बिदा